Izinqolobane ZikaRick Berman - Ilungelo LaseMelika Lokukwazi
Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, inhlangano engenzi nzuzo engu-501 (c) (3) eyasungulwa ngo-2012, ithi iyiqembu elizimele kodwa imibhalo etholwe yi-US Right to Know iveze ukuthi iyiqembu eliphambili elisungulwe ngosizo lweMonsanto nethimba lalo lobudlelwano bomphakathi ukuhlasela ezolimo abagxeka imboni ngenkathi bebonakala bezimele.
Related: Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, IMonsanto iqamba “abalingani bayo bemboni, " Izinkambu zeBiotech Literacy Project
"Izigxivizo zeminwe zeMonsanto Zithole Konke Ukuhlaselwa Kwe-Organic Food, ”NguStacy Malkan, Huffington Post (2016)
Covert izimali zezimboni
Iwebhusayithi yokuBuyekeza yeziFundo ichaza abasunguli bayo ngokuthi “Osolwazi ababili abazimele,” uBruce Chassy, ​​PhD, uprofesa osesikhundleni esiphakeme e-University of Illinois e-Urbana-Champaign, noDavid Tribe, PhD, umfundisi omkhulu e-University of Melbourne, e-Australia. Kusukela ngoMeyi 2018, iwebhusayithi izimangalo, "Ukubuyekezwa Kwezifundiswa kwamukela kuphela iminikelo engavinjelwe evela emithonjeni engeyona yezinkampani ukuxhasa umsebenzi wethu."
Kodwa-ke, amarekhodi entela akhombisa ukuthi umxhasi oyinhloko we-Academics Review kube yi-Council for Biotechnology Information, inhlangano yezohwebo uxhaswe ngemali futhi uqhutshwa ngu izinkampani ezinkulu kakhulu zezolimo: iBASF, iBayer, iDowDuPont, iMonsanto neSyngenta.
Ngokwamarekhodi entela e-CBI, iqembu elixhaswa ngezimboni linikeze ukubuyekeza kwe-Academics isamba esingu- $ 650,000 ngo-2014 futhi 2015-2016. Amarekhodi entela e-AcademicsReview.org abika izindleko ze- $ 791,064 kusuka ngo-2013-2016 (bona 2013, 2014, 2015, 2016). Le mali isetshenziselwe ukuhlela izingqungquthela nokukhuthaza ama-GMO kanye ne-pesticides, ngokusho kwamarekhodi entela.
UDkt Chassy naye ubeneminyaka ethola uxhaso olungadalulwanga kuMonsanto ngeyunivesithi yakhe. Niyabo, “Kungani uprofesa wase-University of Illinois engazange aveze uxhaso lwakhe lwe-GMO?”NguMonica Eng, WBEZ (Mashi 2016)
Ama-imeyili aveza imvelaphi eyimfihlo yeqembu eliphambili lezemfundo
Ama-imeyili atholwe ngu I-US Ilungelo Lokwazi ngokusebenzisa izicelo zenkululeko yolwazi kuveze ukusebenza kwangaphakathi kokuthi ukubuyekezwa kwezifundiswa kwakumiswe kanjani njengeqembu eliphambili ngosizo lweMonsanto, ababambisene nabo bePR kanye nabaxhasi bezimboni. Amaqiniso asemqoka nama-imeyili:
Ngokombiko othile Mashi 11, 2010 uchungechunge lwe-imeyili, Ukubuyekezwa kwezifundo kwasungulwa ngosizo lwabaphathi beMonsanto kanye UJay Byrne, Owayengumqondisi wezokuxhumana ezinkampanini kaMonsanto; futhi I-Val Giddings, owayeyi-VP yomkhakha we-biotech inhlangano yezohwebo i-BIO, njengesikhulumi sokuhlasela abagxeki bemboni yezolimo.
U-Eric Sachs, isikhulu esiphezulu kwezobudlelwano nomphakathi eMonsanto, uthe uzosiza ekutholeni uxhaso lwezimboni lwe-Academics Review. "Ukhiye kuzoba ukugcina iMonsanto ingemuva ukuze ingalimazi ukwethembeka kolwazi," uSachs ubhalele uChassy November 30, 2010.
U-Byrne uqhathanise umqondo njengofana - kodwa ongcono kune - iqembu langaphambili elisungulwe nguRick Berman, i-lobbyist eyaziwa njenge “UDkt Evil”Kanye no “Inkosi yamaqembu aphambili ezinkampani kanye nenkulumo-ze”Ngomsebenzi wakhe wokuqhakambisa izintshisekelo zomkhakha kagwayi nowoyela ngaphansi kwamaqembu azwakala engathathi hlangothi. “Isikhungo Senkululeko Yabathengi 'sikaBerman (ActivistCash.com) sikuthengise kakhulu lokhu; futhi ngicabanga ukuthi sinomqondo ongcono kakhulu, ”kubhala uByrne ebhalela uChassy Mashi 11, 2010.
U-Byrne uthe uthuthukisa uhlelo lwe- “Uhlu lwamathuba nezinhloso” zeMonsanto equkethe "izinhlangano ngazinye, izinto zokuqukethwe nezindawo zezihloko" ezigxeka i-ag-biotech "esho imali yezinkampani ezahlukahlukene ezithende kahle."
UChassy uveze ukuthi uzimisele kakhulu ukulandela umkhakha wezinto eziphilayo. "Ngingathanda ukuthola igama eliphambili phakathi kwe-organic aura lapho ngizoqhuma khona imicibisholo ye-ballistic," wabhala ngo-Mashi 2010. Ngo-2014, i-Academics Review yahlasela imboni ephilayo nge ibike ukuthi ikusho amanga kwakuwumsebenzi wezifundiswa ezizimele ngaphandle kwezingxabano zentshisekelo.
Uhlelo lweMonsanto PR olubizwa ngokuthi yi-Academics Review “njengomlingani womkhakha”
Ukubuyekezwa kwezifundiswa "kungumlingani wemboni" ngokuya ngemfihlo Idokhumenti yeMonsanto PR lokho kuchaza izinhlelo zenhlangano zokudicilela phansi ingalo yocwaningo lomdlavuza lweWorld Health Organisation, i-International Agency for Research on Cancer (IARC), ukuze kuvikelwe isithunzi seRoundup weedkiller. Ngo-Mashi 20, 2015, i-IARC yamemezela ukuthi inakho i-glyphosate ehlukaniswe njenge-Group 2A carcinogen, “Mhlawumbe kubanga umdlavuza kubantu.”
Uhlu lwemibhalo yeMonsanto PR izingxenye ezine zabalingani bemboni ukubamba iqhaza emizamweni yokuxhumana nomphakathi ukuhlambalaza umbiko wephaneli lesifo somdlavuza. Ukubuyekezwa kwezifundo kubhalwe njengohlu lwe-Tier 2 "ophathina wemboni" kanye Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Umuzwa Ngezesayensi, Kwenziwe kabusha, Kanye Izifundiswa ze-AgBioChatter list khonza.
Ukubuyekezwa Kwezemfundo esihlokweni yangomhla ka-25 Mashi 2015 yathi "ukubuyekezwa komdlavuza we-IARC we-glyphosate kwehluleka ezingxenyeni eziningi." I-athikili exhunywe nemboni ixhaswe ngemali Izimpendulo ze-GMO, iqembu langaphambili Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo kanye nendatshana yeForbes kaHenry Miller eyayiyiyo kubhalwe isipoki nguMonsanto.
Ubudlelwano bukaBruce Chassy nezimboni namaqembu angaphambili
USolwazi Bruce Chassy, ​​ongumsunguli we-Academics Review kanye nomongameli webhodi, ubelokhu ekhonjwe njalo kwabezindaba njengochwepheshe ozimele kumaGMOs, kanti ubethola nezimali ezingadalulwanga ezivela eMonsanto.
UChassy uthole ama- $ 57,000 ezimali ezingadalulwanga esikhathini esiyiminyaka emibili esuka eMonsanto ukuhamba, ukubhala nokukhuluma ngama-GMO, ngokusho kweWBEZ. Indaba ibike ukuthi iMonsanto iphinde yathumela okungenani ama- $ 5.1 million nge-University of Illinois Foundation kubasebenzi baseyunivesithi nezinhlelo phakathi kuka-2005 no-2015.
UChassy use “Board of Science and Policy Advisors” yoMkhandlu WaseMelika Wezesayensi Nezempilo, iqembu eliphambili exhaswe ngabakwaMonsanto nezinye izinkampani imikhiqizo yazo evikelwa yiqembu. UChassy ubuye abe “isazi esizimele"Ye Izimpendulo ze-GMO, iwebhusayithi yokumaketha yama-GMO nemithi yokubulala izinambuzane exhaswa yimboni yezolimo.
Imibhalo emayelana nezibopho zomkhakha kaBruce Chassy:
New York Times, "I-Food Industry Yabhalisa Izifundiswa ku-GMO Lobbying War, Ama-imeyili Show," ngu-Eric Lipton (9/5/2015)
Isilondolozi se-imeyili seNew York Times, "A University of Illinois Professor Joinins the Fight," (9/5/2015)
WBEZ, "Kungani Uprofesa Wase-Illinois Engazange Adalule Ukudalulwa Kwezimali ze-GMO," nguMonica Eng (3/15/2016)
Ilungelo le-US Lokwazi, "Ukulandela Umzila We-imeyili: Indlela uProfesa Wenyuvesi Yomphakathi Asebenzisana Ngayo Nomkhankaso Wenkampani PR," nguCarey Gillam (1/29/2016)
UDavid Tribe / Ukubuyekezwa Kwezifundiswa / Biofortified
UDavid Tribe ungomunye wabasunguli be-Academics Review, iphini likamongameli weBhodi yabaqondisi Bokubukeza Izifundo, kanye nombuyekezi kumbiko Wokubukeza Izifundiswa wezi-2014 ohlasela imboni yezemvelo. UTribe futhi uyilungu lebhodi labaqondisi le- I-Biology Fortified Inc., noma i-Biofortified, iqembu elingenzi nzuzo elisiza imboni yezolimo ngokunxenxa nobudlelwano bomphakathi.
Amakamu eBootch Literacy Project Campus axhaswe yizimboni: ukuqeqesha ososayensi nezintatheli ukukhuthaza ama-GMO
Amakamu okufundela iBiotech Literacy Project ayenguchungechunge lwezingqungquthela ezazikhokhelwa imboni yezolimo futhi zahlelwa yi-Academics Review kanye Iphrojekthi Yezofuzo, elinye iqembu langaphambili ababambisana neMonsanto kumaphrojekthi wobudlelwano bomphakathi ngenkathi ethi azimele. Amakamu ama-boot aqeqesha ososayensi nezintatheli ukuthi kwenziwa kanjani ukukhuthaza ama-GMO kanye ne-pesticides, futhi babe nezinhloso ezicacile zepolitiki zokunqanda ukufakwa ilebula kwe-GMO nokuphakamisa ukuxhaswa kokumakwa kwemikhiqizo yezimboni zezolimo.
Abahleli benkambu yeBoot baqamba amanga ezintathelini nakososayensi ukuthi imali yokuxhasa amakilasi e-Biotech Literacy Project yaqhamuka kuhulumeni kanye nasemithonjeni yezifundo, kanye nasemithonjeni yezimboni, kepha okuwukuphela komthombo olandelwayo wezimali waqhamuka ezinkampanini zezolimo nakweminye imithombo engeyona eyezimboni eyenqabile ukuxhaswa ngezimali Imicimbi, uPaul Thacker ubike ngayo I-Progressive.
“Nganikezwa isizumbulu semali engu- $ 2,000 XNUMX, kanye nezindleko. Ngabhala ngabuza ukuthi ngubani ozohlinzeka ngalesi sikhundla futhi ngatshelwa ukuthi kuzohlanganiswa imali evela ku-UC Davis, i-USDA, imali yombuso kanye neBiotechnology Industry Organisation (BIO). ” (Intatheli uBrooke Borel, Isayensi Edumile)
“Ngidinga ukucacisa ngaphambili ukuthi ukwesekwa kwethu kuvela kuBIO, USDA, state-USAID nakweminye imali yesisekelo ngakho imboni ingumxhasi ongaqondile. Siphumele obala ngo-100% mayelana noxhaso. ” (umhleli wekamu lebhuthi uBruce Chassy i-imeyili kososayensi)
I-Council for Biotechnology Information, iqembu lezentengiselwano elixhaswe yi-BASF, Bayer, DowDuPont kanye neMonsanto Company lisebenzise imali engaphezulu kwama- $ 300,000 emakamu amabili amabhuthi abanjelwe e-UC Davis nase-University of Florida, ngokusho kwamarekhodi entela.
Izikhulumi enkanjini yebhuthi ye-Biotech Literacy Project ka-2015 yayihlanganisa abaphathi bemboni ye-biotech kanye nezinhlangano ezisebenzisana nomphakathi, kufaka phakathi owayeyinhloko yezokuxhumana eMonsanto UJay Byrne (osize ukusetha Ukubuyekezwa Kwezifundiswa njengeqembu eliphambili ukuhlasela abagxeki bezimboni), uHank Campbell we iqembu eliphambili i-American Council on Science and Health, no-Yvette d'Entremont i- “SciBabe”; kanye nezifundiswa ezixhunywe embonini UKevin Folta eYunivesithi yaseFlorida, Pamela Ronald futhi U-Alison Van Eenennaam ka-UC Davis; nezintatheli kubandakanya UKeith Kloor futhi UBrooke Borel.
I-Progressive, "Flacking for GMOs: How the Biotech Industry Cultivitive Positive Media - and Dispages Criticism," ebhalwe nguPaul Thacker (7/21/2017)
I-ajenda kanye nababambiqhaza bamakamu okuqalwa kwe-Biotech Literacy Project Inyuvesi yaseFlorida (2014) futhi Inyuvesi yaseCalifornia, eDavis (2015)
Imibhalo yentela: Council for Biotechnology Information, iqembu lokuhweba uxhaswe ngemali futhi uqhutshwa ngu izinkampani ezinkulu kakhulu ze-agrochemical, zinikeze i-Academics Review isamba esingu- $ 650,000 ngo-2014 futhi 2015-2016. I-AcademicsReview.org ibike $ 151,351 kuzindleko yekhempu yase-University of Florida futhi $ 162,936 kuzindleko yekamu le-UC Davis boot.
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO, Uphenyo lwethu, izibulala-zinambuzane Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, Izifundiswa ze-AgBioChatter, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, BASF, Bayer, Inhlangano yezohwebo ye-BIO, Kwenziwe kabusha, Izinkambu zeBiotech Literacy Project, UBrooke Borel, UBruce Chassy, umdlavuza, Umkhandlu Wezokwaziswa Kwe-Biotechnology, UDavid Tribe, DowDuPont, UDkt Evil, U-Eric Sachs, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, Izimpendulo ze-GMO, Henry Miller, IARC, isazi esizimele, imboni umlingani, UJay Byrne, UKeith Kloor, Monsanto, URick Berman, Umuzwa Ngezesayensi, Syngenta, UC Davis, I-University of Illinois e-Urbana-Champaign, Inyuvesi yase-Illinois Foundation, Inyuvesi yaseMelbourne Australia, USDA, v-Fluence Interactive, I-Val Giddings